မော်တော်ယာဉ် လိုင်စင် 3400 views
အတွက်တော့ ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားပိုင်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် သိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအလိုက် လိုင်စင်လျှောက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးတွေက ဘာတွေလဲ၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပျောက်သွားရင် ဘယ်လိုပြန်လျှောက်ရမလဲ၊ ကားလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမယ်ဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ မသိသေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိတိကျကျ သိလိုတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
(၁) လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမျိုးအစားများ
ကိုယ့်အိမ်မှာ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လေးလုပ်ဖို့အတွက် Hijet (နံပါတ်အနက်) လို အသေးစားလုပ်ငန်းသုံးကားလေးတစ်စီး ဝယ်ထားပြီး ပစ္စည်းလေးတွေ အသယ်အပို့လုပ်တယ်ဆိုရင် “င” ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပို့ဆောင်ခွင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် လုပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုင်စင်က အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကို ဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်က ကုန်စုံဆိုင်အတွက် လုပ်မှာလား၊ ကုန်စိမ်းဆိုင်အတွက် လုပ်မှာလားဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြပေးဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကတော့ ပြည်ပက ဧည့်သည်တွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ။ အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Tour ကားတွေကို ဆိုလိုတာပေါ့။ ကားနံပါတ်အရောင်ကတော့ အပြာ၊ “ဃ” ကလည်း အပြာရောင်ပါ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အဲဒီလို လိုင်စင်တွေနဲ့လုပ်နေတဲ့ ကားတွေတော်တော် များလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။
“ဂ” လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုတာကတော့ အခုမြို့တွင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ အငှားယာဉ် (Taxi) လိုင်စင်ကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ စာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ စီးလုံးငှားခရီးသည်ပို့ဆောင်ခွင့် နံပါတ်အနီ၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အနီပါ။
“ခ” လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကတော့ ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခွင့်အတွက်ပါ။ အခုပြေးဆွဲနေတဲ့ လိုင်းကားတွေ၊ အဝေးပြေးခရီးသည်တင်ယာဉ် (Express) တွေမှာ လုပ်ရတဲ့ လိုင်စင်ပါ။
နောက်ဆုံးလိုင်စင်က ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခွင့် အတွက်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ။ တစ်နယ်နဲ့တစ်နယ် ကုန်တင်ကားကြီးတွေနဲ့ ပို့ဆောင်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုင်စင်ကို လျှောက်ရမှာပါ။ ဒီလိုင်စင်လုပ်ပြီးဆိုရင် စပယ်ယာလိုပါတယ်။
ဒီလိုင်စင်ကို အပေါ်က လိုင်စင်ငါးမျိုးထဲမှာ မထည့်ခဲ့တာက ဒီလိုင်စင်က တော်ရုံတန်ရုံ လျှောက်စရာမလိုတဲ့ လိုင်စင်မို့လို့ပါ။ တစ်ခါတလေမှသာ လျှောက်ရတဲ့လိုင်စင်ဖြစ်ပြီး ဒီလိုင်စင်က ယာယီပို့ဆောင်ခွင့် ဒါမှမဟုတ် အထူးလိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် လိုင်စင်အသစ်လဲလှယ်ချိန် ရက်ကြာနေရင် အသုံးပြုတဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပါ။ ဒီလိုင်စင်ကို ဘုရားဖူးကားတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အထက်က ဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ လုပ်ငန်းလိုင်စင် အမျိုးအစားတွေအကြောင်းပါ။ အောက်မှာကတော့ မော်တော်ယာဉ် သက်တမ်းတိုးမယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မော်တော်ယာဉ် သက်တမ်းတိုးမယ်ဆိုရင်
၂၀၁၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းက ထပ်မံပြောင်းလဲ လိုက်တဲ့စည်းမျဉ်းအရ အိမ်စီးကိုယ်ပိုင်ကား (နံပါတ်အနက်) တွေကို လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခွင့် ၂ နှစ်အထိ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျန်ကား (လုပ်ငန်းသုံး၊ အငှားယာဉ်တွေ) တွေကတော့ တစ်နှစ်တစ်ခါ သက်တမ်းတိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ နှစ်သက်တမ်းတိုးခွင့်ရှိတဲ့ ကားအမျိုးအစားတွေမှာဆိုရင် ဂျစ်ကား၊ Saloon? Van? Double-Cab? Station Wagon နဲ့ ၁၅ ယောက်စီး မိုက်ခရိုဘတ်စ်တွေ၊ ဟိုက်ဂျက်လိုကားတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
- ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် မိမိသက်တမ်းတိုးတဲ့ ကညနရုံးမှာ သွားရောက်လျှောက်ထားရပါမယ်။
- မိမိမှတ်ပုံတင်မူရင်း/မိတ္တူ၊ အပြာရောင် နောက်ခံပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ လိုအပ်ပါမယ်။
- ကညနရုံးမှာ မိမိလိုင်စင်အမှတ်နှင့် အပျောက်ပုံစံဖြည့်ရပါမယ်။
- အဲဒီပုံစံနဲ့ ၅၁ လမ်း ယာဉ်ထိန်းရုံး ဒါမှမဟုတ် ကညနရုံးမှာရှိတဲ့ ရဲမှုစစ်မှာ ရဲမှုခင်းကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်ယူရပါမယ်။
- အဲဒီထောက်ခံချက်ရပြီဆိုတာနဲ့ ကညနရုံးမှာ လိုင်စင်ပျောက်ထုတ်ယူပါ။
- ကိုယ့်ရဲ့လိုင်စင်အမှတ်ကို မသိရင် ကိုယ့်နာမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ဖခင်အမည်နဲ့ ကညနကွန်ပျူတာမှာ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
- လိုင်စင်သက်တမ်း ၅ နှစ်ကျော် သက်တမ်းပြတ်နေမယ်ဆိုရင် အသစ်လိုပြန်ဖြေပြီးမှ လိုင်စင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Source - ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန